AmaProteas ahlula amaBlack Caps kusele izinsuku ezimbili
uKESHAV MAHARAJ udlale incwenga ukusiza amaStandard Bank Proteas ukuba ngaphambili ngo-1-0 emuva kokuthi bahlule iNew Zealand ngama-wicket angu-8 ngasekupheleni kosuku lwesithathu lweTest yesibili eBasin Reserve eWellington ngoMgqibelo.
Lomdlali wesandla semfene uthole u-6/40 kuma-overs angu-20.2 ukuze adlule i-best yakhe yokuqala engu-5/94, ayithola kumdlalo weTest odlulile, njengoba iqembu lasekhaya liphume lonke ngama-runs angu-171 kwi-innings yayo yesibili, okushiye iSouth Africa nama-runs angu-81 ukuze inqobe.
Futhi babenesiqiniseko ukuthi bafinyelela khona ngobusuku besithathu emuva kokusebenzisa uhafu wehora, uHashim Amla waqeda enama-runs angu-38 – izivakashi zahamba phambili kwi-series njengoba bebheke eHamilton ngeTest yokugcina ezoqala ngoMgqibelo ozayo.
Usuku lokugcina luqale lumatasatasa uVernon Philander (37 not out) noMorne Morkel (40) besashaya, kodwa emuva kokunweba i-partnership yabo ku-59, uJeetan Patel uqede i-innings yama-Proteas ku-359 kanye nokuba ngaphambili ngama-runs angu-91.
uMorkel uthathe ama-wickets amathathu okuqala, kubalwa ne-wicket kakapteni, uKane Williamson (1) emuva kokuhluleka kabili into engajwayelekile, okushiye iNew Zealand iku-64/3.
uMaharaj ulandele lokhu ngokukhipha umdlali othole ikhulu kwi-innings yokuqala, uHenry Nicholls (7) noJimmy Neesham (4), okushiye iqembu lasekhaya lilahlekelwe ama-wicket amahlanu benama-runs angu-90.
Ovula umdlalo uJeet Raval uthole i-highest Test score engu-80, ebambezele umdlalo weSouth Africa kancane, eshaya noBJ Watling, owenze ama-runs angu-29.
Bobabili bahlanganise ama-runs angu-65 nge-wicket yesithupha, kodwa bobabili babeyinxenye ekuphumeni kweqembu lasekhaya njengoba balahlekelwe ama-wicket amahlanu ngama-runs angu-16 ukuze baphume bonke kuma-overs angu-63.2.
uMaharaj ube inkanyezi njengoba ethole i-career five-for yakhe yesibili kwiqembu lasekhaya. Kuphinde kwaba ama-fifth-best figures ahlanganiswe i-spinner sase-South Africa phesheya futhi wahlanganisa umjaho omncane.
uStephen Cook uqhubekile nomzabalazo wakhe ngama-runs angu-11 futhi uDean Elgar wenze ama-runs angu-17, kodwa ukuzotha kwa-Amla kuhambise izivakashi ekunqobeni.
Ithemba nenhlanhla kusiza uDuminy Ama-wicket asekugcineni ashiya womabili amazwe egculisekile AmaProteas alungiselela ukubeka yonke into encupheni kwiTest yesibili Imvula ithatha usuku lokugcina eDunedin uElgar noDu Plessis bagcina amaProteas ehamba phambili iMaiden five-wicket haul kaMaharaj igcina amaProteas kumqhudelwano Abaphosela amaProteas kumele babekelekele kwisimo esikhohlisayo AmaProteas ne-New Zealand bami kahle ngosuku lwesibili Usuku obelunzima impela - uElgar Ikhulu lika-Elgar lihola ukubuya kwama-Proteas uRabada noTahir banqobisa iqembu i-series